संघीयतापछिको सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
महँगो संघीयताको भार नेपालीमाथि थोपरिनु आवश्यक छैन, यसले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनाउँछ, विकास ठप्प हुन्छ आदि भन्नेहरूको तप्का अहिले पनि ठूलै छ । यो आलेख संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले दुई वर्षमा गरेका कामको चर्चाभन्दा पनि संघीयतामा प्रवेशपछि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिसूचकबारे केन्द्रित छ । यहाँ प्रयुक्त परिसूचकहरूको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१९ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा आधारित छ, जसमा १९४ देश समेटिएका छन् र जुन २०२४ सम्मका लागि प्रक्षेपित छ । जस्तो— २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति १,०४७ रहेकामा २०२४ मा यो १,५८२ अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पूरा भएकोपरिप्रेक्ष्यमा विश्लेषणका लागि आधार वर्षका रूपमा २०१७ लाई लिइएको छ ।
माथि उल्लिखित आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएको परिवर्तन तथा सुधार संघीयताकै कारण सम्भव भएको हो । तर यी सुधार अझै पर्याप्त चाहिँ छैनन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । कर्मचारी खटनपटन, कानुन निर्माण, सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गाप्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा त्यति सहयोग नपाएको र संघीय सरकार सहिष्णु नरहेको गुनासो प्रदेशको छ । अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा थप छलाङ मार्न संघले प्रदेशप्रति सहिष्णु हुनु जरुरी छ । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:०२
फाल्गुन १४, २०७६ सम्झना वाग्ले भट्टराई
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको अनियमितताको नालीबेली र शिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा सिँगारिएको फूलको लुछाचुँडीका समाचार मिडियामा लगातार जस्तै आए । यी दुवै परिघटना आजको नेपाली समाजको चरित्र बुझ्ने आँखीझ्याल हुन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौंका यी प्रसंगका विविध स्वरूप र आकार सबैजसो प्रदेश र पालिकासम्म देख्न सकिन्छ । उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।
शासकहरू के गर्थे, गर्छन् ? हामीले राणाा शासकका प्रवृत्तिबारे पढ्यौं । तिनीहरू र तिनका आसेपासेले गरेका राज्यस्रोतको दोहनबारे पढ्यौं । पञ्चायतकालका राजा र पञ्चका प्रवृत्ति र व्यवहारबारे आज पनि अग्रजहरू लेखिरहन्छन् । अहिले राजनीति गर्नेहरू तिनै विषयलाई राजनीतिक मसला बनाइरहन्छन् । यसबारेका विविध तथ्य–कथ्य हामीले पढेसुनेका छौं । प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका शासकहरू, उनीहरूका व्यवहार र शासनशैली हामीले देखेभोगेकै छौं । साक्षीहरू जीवित छन्, सम्झनाहरू ताजा छन् । तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्— शासकहरू समान चरित्रका हुने रहेछन् ।
राणाकालमा पनि तिनका आफन्त, आसेपासेलाई स्वर्णयुग थियो । पञ्चहरूलाई पञ्चायतकालमा त्यस्तै थियो । भनिरहन परोइन, २०४६ सालपछिको कालखण्डमा कांग्रेस र एमालेका नेता, तिनका आफन्त तथा नेतृत्ववरिपरि झुम्मिइरहने अवसरवादीहरूलाई वास्तविक प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यस अवधिमा आफ्नो आर्थिक–सामाजिक जीवनमा भएको उपलब्धिका कारण त्यसलाई युगकै उत्कृष्ट कालखण्डका रूपमा चित्रण गर्दै अभिभूत हुनेहरू अझै प्रशस्त छन् । पछिल्लो गणतान्त्रिक युगको परिदृश्य हामीसँग ताजा छ । समृद्ध नेपालका सुखी जनतालाई तपाईं, हामी प्रशस्तै भेट्न सक्छौं । ती सुखी र समृद्ध नेपालीको जरो–किलो खोज्न थाल्नुभयो भने एकै ठाउँ पुग्नुहुन्छ ।
शासकका गोत्रभित्र नपर्ने आम मान्छेको अवस्था कस्तो छ त ? मेरै अनुभव प्रस्तुत गर्छु । एक काका हुनुहुन्छ, जसले २०४३ मा एसएलसी पास भएपछि जिल्लाकै दुर्गम गाउँको विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो । झन्डै ३ वर्ष पञ्च सरकारको तलब बुझ्नुभयो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको नुन पर्‍यो, उहाँको मुखमा । केही वर्षदेखि गणतान्त्रिक सरकारले तलब दिइरहेको छ । जागिरका अन्तिम वर्षहरूमा उहाँसँग मेरो प्रश्न थियो, ‘तीन किसिमका राजनीतिक व्यवस्था ब्यहोर्नुभयो । फेरिंदो राजनीतिसँगै के–के फरक महसुस गर्नुभयो त ?’ उत्तर थियो, ‘जुनै व्यवस्था आए पनि पढाएरै तलब लिने हो क्यारे ! राजनीति गर्नेहरू, नेताका आफन्तहरू घरपायक सरुवा मिलाएर आए, नपढाएरै पनि तलब बुझे । हामीलाई त उस्तै हो, ठाउँमा आफ्नो भन्ने कोही थिएन ।’
काकाले भनेजस्तै ‘ठाउँमा आफ्नो नभएकालाई’ परिवर्तित व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक आफ्ना हुन किन सकेनन् ? राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरू, तिनका आफन्त तथा नेताहरूलाई विविध कमिसनको ‘अफर’ गर्ने ल्याकत भएकाहरूको संख्या देशमा कति होला ? तीबाहेक जीवन बिताउन सोझो ढंगले पेसा, व्यवसाय तथा श्रम गर्ने विशाल जनसंख्याको भोगाइ पनि काकाको भन्दा फरक छैन होला । यस कित्ताका मान्छेले फेरिंँदो सत्ता, शासन र व्यवस्थालाई साँच्चै फरक महसुस गरेका होलान् ? अनुभव गर्न सकिने उपलब्धि के दिएका छन् त परिवर्तित सत्ता सञ्चालकले ?
भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले पानी, बिजुली, यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गरेका सुधारले शासकले चाहेमा केके गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखाएका छन् । यस्ता सुधारका लागि संविधानमै ‘समाजवाद–उन्मुख’ नलेखे पनि हुने रहेछ कि ? यस्तो काम गर्न हाम्रो शासन संयन्त्रलाई केले रोक्यो होला ?
देशमा सकारात्मक परिवर्तन नभएकै त होइन । परिवर्तन आएको छ, तर किस्ता–किस्तामा । झन्डै सय वर्षको विगत हेर्दा पनि, नेपालमा देखिएका चार किसिमका शासन व्यवस्था तत्तत् शासक, तिनका आफन्त तथा आसेपासेका स्वर्णिम युग थिए, छन् । तत्तत् व्यवस्थाका पुजारीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत बढेको थियो, छ । त्यस्ता शासकको गुणगानमा राणाकालमा चन्द्रशमशेरको ‘रामराज्य’ लेखिएकै हो । त्यसपछिका हरेकजसो शासकले त्यसका नयाँ–नयाँ संस्करण लेखेका छन्, लेखाएका छन् । तिनका नयाँ संस्करण खोज्न कुनै इतिहास पल्टाउनुपर्दैन ।
निश्चित व्यक्ति र समूहलाई सरकारले दिएको व्यावसायिक अवसरका आधारमा राज्यको चरित्रलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ भन्ने गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा पनि राज्यको चरित्र उस्तै छ । शक्ति र सत्तानिकटलाई कानुनले नछोएका केही ताजा दृष्टान्तका आधारमा देशमा अभ्यास भैरहेको लोकतन्त्रलाई ‘क्रोनी लोकतन्त्र’ अर्थात् ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ को नाम दिनु उपयुक्त नै होला । यस्तो ‘आसेपासे लोकतन्त्र’ ले छुट्टै खाले सामाजिक मानोविज्ञान निर्माण गर्ने रहेछ । यस्तो मनोविज्ञानले आम मान्छेलाई पार्टीमा आबद्ध हुन मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको छ । परिणामत: हरेक व्यक्ति आफ्नो कर्म, पेसा, व्यवसायभन्दा पनि पार्टीमा आबद्ध हुन र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने अभ्यासमा लागेको छ ।
पार्टीमा आबद्ध भएपछि प्राप्त हुने संरक्षणले सबैजसोलाई आकर्षित गरेको छ । त्यस्तो अवसरप्राप्त व्यक्तिबाट अर्को पनि प्रेरित हुन्छ, जसलाई मनोविज्ञानमा ‘ह्यालो इफेक्ट’ भनिन्छ । आफूलाई पार्टीकरण गर्न लालायित आममान्छे मात्र होइन, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका नेपाली शासकका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यस्तो प्रभाव छर्लङ्ग देखिन्छ । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, शासकहरूको व्यवहार, शैली र लोभ एकै किसिमको देखिनु ‘ह्यालो इफेक्ट’ नै हो । त्यस्तै सिकाइले त होला, हामीले भोगिरहेका शासकहरू पनि इतिहासमा पढेका शासकहरूजस्तै भएका !
यही मनोविज्ञानका कारण सबैजसो राजनीतिक दलका शक्ति र सत्ताप्राप्तिका बाटाहरू झन्डै उस्तै लाग्छन् । मूलधारका हुन् वा वैकल्पिक राजनीतिका अभ्यासी, सबै कर्ममा होइन भाषणमा केन्द्रित छन् । अघिल्ला शासकको शासकीय चरित्रविरुद्ध आगो ओकल्नेहरू शासकीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘आमाभन्दा छोरी बोक्सी’ हामीलाई लाग्दैन र ? शासकीय जिम्मेवारीप्राप्त कतिपय युवा नेता अघिल्लो पुस्ताभन्दा चर्का लाग्दैनन् र ?
शासकहरू आफैले औंल्याएको अघिल्लो पुस्ताका कमजोरी सुधार्नभन्दा त्यही दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । सायद शक्तिको उन्मादले उनीहरूमा ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । कलियुगको यो वयस्क कालखण्डमा पनि चक्रवर्तीहरूझैं ‘अश्वमेध यज्ञ’ गर्ने वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई देखाएर संविधान संशोधन गराउनेसम्मको सोच आउनु त्यस्तै मनोविज्ञान हो । राज्यको बजेटलाई निजी स्वार्थमा उपयोग गर्न पनि यस्तै मनोविज्ञानले मलजल गरेको हुन्छ । यो मनोविज्ञानको प्रधान आधार भने पशुपतिमा सिँगारिएको फूलमा हात लम्काउने र तिनलाई काँध दिने जिम्मेवार नागरिकहरू नै हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०७:५९